SARAN’NY SARY AMIN’NY CAN 2019
1 tapitrisa euros na 4 miliara ariary ny vola tsy maintsy haloan’ireo firenena Afrikanina raha te hahazo ny sary rehetra momba ny fifaninanana CAN 2019 hotanterahana any Egypte ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay ho avy izao.
Maro amin’ireo firenena Afrikanina no milaza sahady fa lafo ilay sarany ary ho sarotsarotra ny hanefana azy, indrindra fa mbola misy ny vola tsy maintsy hatontona amin’ny fikarakarana ny ekipa sy ny delegasionina ho avy any an-toerana hiatrika ny fifaninanana.
Ahitana dingana manokana miisa 12 ny Rallye Motul izay hotanterahana eto Antananarivo ny 17,18 ary ny 19 mey ho avy izao. 296,37 km no halaviran-dalana hifaninanana ao anatin’izany. Ity no dingana faharoa amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eto amin’ny familiana fiarakodia amin’ity taona ity.
HAZO SAROBIDY 353 KAONTENERA NANJAVONA
Kaontenera miisa 353 feno hazo sarobidy antsoina hoe Kevazingo no nanjavona tsy hita popoka tao amin’ny seranan-tsambon’i Owendo any Gabon. Efa nogiazan’ny fanjakana ny volana martsa lasa teo ireto kaontenera ireto satria tsy ara-dalàna ireto hazo sarobidy izay efa mitady ho lany tamingana ireto. Nahagaga anefa fa dia nanjavona tampoka izy ireo.Mitovitovy amin’ny andrramena eto Madagasikara ny Kevazingo ary tena lafo vidy tokoa any Azia.
Nanao andrana tifitra balafomanga miisa roa indray omaly i Korea Avaratra. Nitranga ora vitsy taorian’ny fahatongavan’Atoa Stephen Biegun, solontena manokan’i Etazonia ho an’i Korea Avaratra tany Seoul renivohitr’i Korea Atsimo izao tifitra izao. Balafomanga tsy mahataka-davitra ireto notifirina ireto raha araka ny fanamarihana nataon’ny tafika Koreanina Tatsimo. Miverina amin’ny andrana tifitra balafomanga indray izany i Korea Avaratra.